दाँत किन हुन्छ पहेँलो ? दाँतको दाग हटाउने र सेतो बनाउने उपायहरु – ।।दाङ खबर।।
Home / जीवन शैली / दाँत किन हुन्छ पहेँलो ? दाँतको दाग हटाउने र सेतो बनाउने उपायहरु
दाँत किन हुन्छ पहेँलो ? दाँतको दाग हटाउने र सेतो बनाउने उपायहरु
२०७४, २८ कार्तिक मंगलवार ०८:११	जीवन शैली
पहिलो कुरा त के बुझ्नुपर्छ भने दाँत दूध जस्तो सेतो चाहिँ हुँदैन । यसको रङ बढ्दो उमेरसँगै परिवर्तन हुँदै जान्छ । दाँतको बाहिरी भागको इनामेल खिइँदै जाने हुनाले रङ पनि बदलिँदै जाने हुन्छ । दाँत सेतो बनाउनुभन्दा पहिले दाँतको रङ के कारणले परिवर्तन भएको हो भन्ने थाहा पाउन जरुरी हुन्छ । कारण अनुसार उपचार पद्दति पनि फरक(फरक हुन्छ। दाँतमा बस्ने दाग प्रायः दुई किसिमका हुन्छन, बाहिरी र भित्री ।
बाहिरी दाग प्रायः अस्थायी हुन्छन् र मेसिनले सफा गर्दा हट्छ। भित्री दाग भने हट्दैन र यिनीहरु स्थायी हुन्छन् र यसले सम्पूर्ण दाँतको रङ नै परिवर्तन गरिदिन्छन्। दाँतमा दाग बस्ने र रङ परिवर्तन हुने कारणहरु निम्नानुसार छन्स्
<strong>दाँतको दाग हटाउने र सेतो बनाउने उपायहरुः</strong>
बाहिरी दागहरु दन्त चिकित्सककोमा गएर समय(समयमा मेसिनले सफा ९स्केलिङ० गर्ने।
दाँतको बाहिरी भाग छोप्ने र दाँतमा खोल लगाउनेः दाँतको बाहिरी भाग जहाँ रङ परिवर्तन भएको छ त्यस भागलाई दाँत रङको सिमेन्टले छोप्ने वा दाँतमा खोल हाल्ने । यो प्रविधि अधिक रङ परिवर्तन भएको अवस्थामा अपनाउन सकिन्छ।
प्रत्येक ६–६ महिनामा दन्त चिकित्सककोमा गएर आफ्नो दाँत परीक्षण गराउने ।
ब्लिचिङ गर्नेः ब्लिचिङ दाँत सेतो बनाउने प्रविधि हो। यो घरमा तथा दन्त चिकित्सककोमा गएर गर्न सकिन्छ। पेरोक्साइड केमिकलको प्रयोगद्वारा दाँत सेतो बनाइन्छ। यो नशा मरिसकेको र जरैदेखि उपचार गरेको दाँत तथा स्वस्थ दाँत दुवैमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। यो पद्दतिले स्थायी रुपमा परिवर्तन भएको दाँतको रङलाई पनि सेतो बनाउन मद्दत गर्छ। भित्री दाग हटाउन यो तरिका उपयुक्त मानिन्छ। -डा.सुनिता खनाल
२०७४, २८ कार्तिक मंगलवार ०८:११
Previous त्रिपक्षीय चेपुवामा मधेसी दलका नेता: मधेस गठबन्धनका उम्मेदवारलाई कसले दिदैँछन् चेक ?
Next अस्पतालमा दुई दिनमा दुई शिशु साटिएको भन्दै खैलाबैला